Dhalista Adkaynta, Dhalista Isku-duubista Cajaladda, Cirbadaha Wareejinta Cirbadda - LGGB
Shiinaha Ningbo Cixi LGGB Bearings Co., Ltd. wuxuu ku yaal Cixi Ningbo, Zhejiang Povince., Waa soo saare ku takhasusay jihada.
LGGB waxay u adeegtaa labada qaybood ee OEM iyo suuqleyda. Saa'idka Our waxaa loo isticmaalaa in Automotive ah, warshadaha, Macdanta, Beeraha, Wax-qabashada iyo warshadaha Gaadiidka. Waxay cadeeyeen inay ku guuleysteen codsiyada muhiimka ah, iyagoo shaki ku jirin tayada iyo kalsoonida badeecadaheena. Nooca LGGB ee LGGB wuxuu u koray inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna ixtiraam badan Shirkadaha Biyo-dhalista ee Shiinaha.
Qaybaha Dhalista iyo Guryaha UCP Taxanaha
Qaadista Guryaha HC taxane
Kaqeybgalka shirkadda ee macluumaadka bandhigga
Oktoobar 24, 2020
1. Laabista ama si khaldan loo dhigayo mashiinka mashiinka biyaha ayaa sababi doona in bamka biyuhu ruxo oo uu sababo kuleyl ama xirashada qalabka. 2. Kordhinta riixitaanka foosha (tusaale ahaan, marka saxanka dheelitirka iyo giraanta dheelitirka ee bamka biyaha si daran u duugoobaan), culeyska foosha ee xambaarsan ...